Home Wararka R/W Rooble oo Guddi soo Baara u Saaray “Ooyinta Hooyooyinka iyo inay jiraan...
R/W Rooble oo Guddi soo Baara u Saaray “Ooyinta Hooyooyinka iyo inay jiraan Ilmo Ka maqan”! Yaab
Waxaa wax lala yaabo ah in dowladdii NN oo iyada dirtay dhallinyarada kana iibsatay dalalka u iticmaalay calooshood u shaqeystenimada inay hadda leedahay waan soo baareynaa. General Odawaa oo golaha shacbiga hortiisa ka sheegay inuusan ka warqabin cid la geeyey Erateriya iyo wasiirkiisa ayaa hadda waxaa la leeyahay waxay soo baaraayaan arrinkaan Murugada leh. Waa iyadoo la yiri Tuug bangi dhacay shalay la yiri soo baar in bangiga la dhacay iyo in kale.
Somaliyey waxani waa ceeb dowlanimana sidaan maaha dunida waa nala yaaban tahay oo ma taqaan si ay noola macaamisho. Ma xoolaha ayey nagu tiriyaan misa ma yeernee waan hadleynaa oo sidii dad ayey noo texgeliyaan? Bal adiguba caqlaad leedahay is weydii dowlladda ku leh waxaan soo baareynaa in hooyooyinka ay been sheegayaan iyo inay jiraan dhallinyaro dalka laga qaaday oo calooshood u shaqeystayaal laga iibsaday.
Runntii waa aqoonxumi dowladeed iyo liidasho maamul aqoon oo uu muujiyey RW Rooble, xataa haddii lagu khasbay waxay bannaanka soo dhigtay daciifnimadiisa.
Dad badani waxay caawa isweydiinayaa sidee dowladdii dirtay ciidankaan oo og tiradiisa iyo ujeedadiisa inay maanta tiraahdo waxaan u direynaa guddi soo baara xagee loo diray? Imisa ayey ahaayeen? Yaa tababarayey? Iyadoo xafiisyada wasiirka gaashaandhigga iyo taliyaha xooga ay yaalliin waraaqihii dhallinyaradaas lagu halligay.
RW Rooble sida wararku sheegayaan isagayaan waxaa uu isku dayayaa inuu waqtiga ku dheereysto maalina magacaabidda guddiyo xaaraan ah. Tusaale waxaa kuugu filan labadaan guddi oo uu magacaabay oo dhammaantood kuwa loo diray inay iyagu is baaraan jawaabtana sidey doonaan u soo celiya.
Guddigii ayuu saaray inay soo baaraan eedahay laga keenay gudiiga doorashooyinka waxaase yaab leh maaha ma aha guddi madax bannaan ee waa:
Wasiirro markii hore ansixiyey guddiga doorashooyinka.
Rag xil raba oo aan ku dhicin inay wax ka yiraahdaan qof maalmo kadib loo dhiibi karo inuu ka arrimiyo masiirkiisa, tusaalaha ugu cad waa Alcadaala oo raba inuu xildhibaan soo noqdo sidee uu ayuu oran karaa hebel waa NISA ee halaga saaro iwm.
Arrinta guddiga uu hadda u magacaabay RW Rooble inay soo sheegaan inay hooyooyinkan ay been isaga ooysiinayaan waa doqonimo weyn oo uu ku dhacay Rooble, tan oo wax weyn u dhimi doonta aaminkii caatada ahaa ee beryahan ay u sameeyeen mucaaridka oo wax waliba uga tanasulaya si uun doorasho loo qabto.
Dowladd waa tii shalay lahayd ooyinta hooyooyinka waxaa lagu qarinayaa weerarka Kenya oo ilaa shalay la caayey inay dalka soo weerartay , haddana maantana laga baryayo inay soo celiso safiirkooda iyo xiriirkii. War waxani dowlad maaha ee waa doqomo degay halkii dalka looga talinayey inkaar an ka harin rabbi haku ridee waa na ceebeeyeen ummad ahaan dunida ma taqaanno si ay noola dhaqanto.
Gen. Odawaa waa kii lahaa anigu ma ogi cid tababar loo diray, wasiirkana ma oga oo ciidan ma haysto oo anigaa ciidanka haya miyaa maanta laga filayaa inuu yiraahdo:
Waa jiraan dhallinyaradaan waxaana tababar loo geeyey Dalka Erateriya, kadibna waxaa lagu shubay dagaalka Tigray oo laga hormariyey ciidanka Tababaray ee Earateriya oo goobtaas ka dagaallamayey si aysan ciidan badan uga dhima Erateriya, iyadoo la ogaa inay Tigray naf la caari ahaayeen oo dabka saarayeen cidkasta oo ka hortimaado maadaama la gumaadayey sida dunida sheegtay.
Shalay markii aan barlamaanka la hadlayey aniga oo Odawaa ah waxaan sheegayey waa ka kac iyo been laakiin hadda ayaan sheegayaa oo dhaallinyaradaas waa jiraan, ooyinta hooyooyinkan waa run iyo xanuun.
Gabagabdii dalkaan waxaa uu ku socdaa halaag mana hubo xataa inuu sugi karo doorashadaan uu maalinta meel cusub geynayo Rooble. Dalka waa dumayaa waxaana suuragal inuu amaanka faraha ka baxo taas oo ka iman karto:
Inay soo karto carada caruurtaan maqan oo ay suuragal tahay inay soo baxdo xog rasmi ah inay dowladda heshiis ku gashay inay dagaalka la geliyo.
Dhaqanxumada dowladnimo ee uu hadda bilaabay inuu horseedka ka noqodo RW Rooble, taas oo ah inuu marba guddi xaaraan ah u magacaabo marka ay cabasho timaado.
Adkeysiga shacbiga oo dhamaada iyo kooxo ka faa’iideysta dhacdooyinka is biirsanaya.
Talo rasmi ah ayey arrimahan u baahan yihiin waxaana dareekeennu yahay sida ugu dhow ee wax loo xaalin karo waa inay dib u kulmaan kooxdii heshiiska gaaray oo ay daba qabtaan xaaladda haddii kale mucaaridku waa inaysan dembiga la qeybsan kooxda iyo dowladda oo hadda sii dhiiqoobeysa.